Ebook ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ
ကက်သလစ်နှင့် Non- ကက်သလစ်သတင်းအချက်အလက်
အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် သြဂုတ်လ 7, 2020 သြဂုတ်လ 7, 2020
ထိုနေ့၏လက်တွေ့ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်မှု - ဘုရားသခင်၏ Providence
အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် မေလ ၁ ရက်၊ မေလ ၁ ရက်၊
ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆွေးနွေးမှု - ebook
ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သို့ "ကျွန်ုပ်တို့၏အလင်းကိုလင်းစေနိုင်" သနည်း။
ဗာတီကန် - "အသိုင်းအဝိုင်း၏နာမ၌" အုပ်ချုပ်သောနှစ်ခြင်းများသည်မမှန်ပါ
San Gaetano, သြဂုတ်လ7ရက်၏နေ့၏စိန့်
ဘုရားသခင်အား“ ဟုတ်ကဲ့” ဟုပြောလိုစိတ်ရှိမရှိယနေ့စဉ်းစားပါ
အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် သြဂုတ်လ 6, 2020 သြဂုတ်လ 6, 2020
လက်ဘနွန် Cardinal - ဘေရွတ်ပေါက်ကွဲမှုအပြီးတွင်“ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်အလွန်တာဝန်ရှိသည်
Paolo Tescione	အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် သြဂုတ်လ 7, 2020 သြဂုတ်လ 7, 2020
Providence 1. Providence တည်ရှိ။ အကြောင်းမရှိဘဲအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအရာအားလုံးကိုထိန်းညှိပေးသည့်အမြဲတမ်းဥပဒေတစ်ခုကိုသင်တွေ့မြင်သည်။ သစ်ပင်သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၎င်း၏အသီးကိုသီးသည်။ ငှက်မသည်အပင်ကိုအစဉ်တွေ့၏။ ၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်စနစ်များ ...
Paolo Tescione	အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် မေလ ၁ ရက်၊ မေလ ၁ ရက်၊
ဒီ link မှာအမေဇုံပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ = 0894-6 ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်စကားပြောခြင်း။
ချစ်ခင်ရပါသောသန့်ရှင်းသောအုပ်ထိန်းသူကောင်းကင်တမန်မင်း၊ ကျေးဇူးတော်၌တည်။ ဘုရားသခင်အားကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါ၏
(အောက်တိုဘာ ၁၄၈၈ မှ ၁ သြဂုတ် ၇ ရက်၊ သြဂုတ်လ ၇ ရက်) San Caetano ၏ပုံပြင်ကျွန်ုပ်တို့အများစုကဲ့သို့ Gaetano သည်သာမာန်ဘဝသို့ ဦး တည်နေပုံရသည် - ရှေ့နေအနေနှင့်၊ ထို့နောက်ရောမ Curia ၏လုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးအနေနှင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာ…
ငါ့နောက်သို့လိုက်လိုသောသူသည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ငြင်းပယ်ရမည်။ ကိုယ်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထမ်း။ ငါ့နောက်သို့လိုက်ရမည်။
Paolo Tescione	အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် သြဂုတ်လ 6, 2020 သြဂုတ်လ 6, 2020
Paolo Tescione	အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် သြဂုတ်လ 6, 2020 သြဂုတ်လ 7, 2020
ကျေးဇူးတော်ရရန် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊
Ida အဖြစ်လူသိများ THE APPARITIONS Isje Johanna Peerdeman, လူမျိုးခပ်သိမ်းတို့နောက်ခံသမ္မတကတော်, ငါးကလေးများ၏အငယ်ဆုံး, နယ်သာလန်, Alkmaar အတွက်သြဂုတ်လ 13, 1905 ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ အိုင်ဒါရဲ့ပထမဆုံးထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ ၁၉၁၇ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်။
၁. ပျင်းရိခြင်းပြTheနာများ။ ဒုစရိုက်တိုင်းသည်သူ့အတွက်အပြစ်ပေးခြင်းခံရသည်။ မာနကြီးသူသည်စိတ်ဓာတ်ကျသည်။
သြဂုတ် ၆ ရက်နေ့၏နေ့ဘုရားသခင့်နေ့၊
သခင်ယေရှု၏အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာခရစ်ဝင်ကျမ်း (၃) ခုစလုံးကဤအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြသည်။
သင်၏ ၀ ိညာဉ်၌ဘုရားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့သောပြောင်းလဲမှုကိုယနေ့ပြန်လည်စဉ်းစားပါ
ယေရှုသည်ပေတရု၊ ယာကုပ်၊ သူ့ညီယောဟန်ကိုခေါ်။ ၊ မြင့်လှစွာသောတောင်ပေါ်တွင်ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သို့ဆောင်ကြွတော်မူ၏။
Our Lady ၏သြဂုတ်လ ၅ ရက်မွေးနေ့ဆုတောင်းခြင်း
Paolo Tescione	အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် သြဂုတ်လ 5, 2020 သြဂုတ်လ 5, 2020
ယနေ့သြဂုတ်လ ၅ ရက်တွင်သူမနေထိုင်သောအလွန်လှပသောကောင်းကင်မိခင်၏မွေးဖွားခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သတိရသည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေသောနည်း ၆ နည်း
သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ယုံကြည်သူများအားသခင်ယေရှုကဲ့သို့အသက်ရှင်ရန်ရဲရင့်စွာခွန်အားပေးသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါကိုလုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့အသုံးအများဆုံးအကြောင်းတွေပြောကြမယ်။ ယော ၁၆း၇ တွင်သခင်ယေရှုမိန့်မြွက်သည်။
လက်တင်အမေရိကအတွက်ဗာတီကန်ဖောင်ဒေးရှင်းသည်နိုင်ငံပေါင်း ၂၃ နိုင်ငံတွင်စီမံကိန်း ၁၆၈ ခုကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မည်ဖြစ်ပြီးအများစုမှာ…
သြဂုတ်လ ၅ ရက်အတွက်စိန့်မာရီယာမဂ်ဂရီယာ၏ Basilica ကိုအပ်နှံသည်
Santa Maria Maggiore ၏ Basilica အပ်နှံပွဲအကြောင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။
ထိုနေ့၏လက်တွေ့ဆည်းကပ်ဝတ်ပြုမှုသည်လူတစ် ဦး ၏တာ ၀ န်များကိုသန့်ရှင်းမြင့်မြတ်စေသည်
၁။ ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်တာဝန်များရှိသည်။ လူတိုင်းသိတယ်၊ ပြောကြတယ်၊
သြဂုတ်လ ၅ ရက်၊ ငါတို့သမီး၏မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ၊ ဤဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ
Paolo Tescione	အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် သြဂုတ်လ 5, 2020 သြဂုတ်လ 6, 2020
MEDJUGORJE သို့အကြောင်းကြားစာ "လာမည့်သြဂုတ်လ ၅ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယထောင်စုနှစ်ကိုကျင်းပခဲ့သည်။
ထိုမိန်းမသည်ချဉ်း ကပ်၍ ပြပ်ဝပ်လျက်ကျွန်မကိုကယ်တော်မူပါသခင်ဟုလျှောက်ပြန်လျှင်၊ သူကတုန့်ပြန်ဖြေကြားသည်မှာ - "ကလေးသူငယ်တွေရဲ့အစားအစာကိုယူပြီးခွေးတွေကိုပစ်ထည့်တာဟာမမျှတဘူး" သူက“ သခင်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ခွေးများပင်စားကြွင်းစားကျန်များကိုစားကြသည်။
ဗာတီကန် - ဘင်နီဒစ် XVI ၏ကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိ
Paolo Tescione	အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် သြဂုတ်လ 4, 2020 သြဂုတ်လ 4, 2020
ဗာတီကန်သည်ဘင်နီဒစ် XVI ၏ကျန်းမာရေးပြnotနာများမဟုတ်ဟုတနင်္လာနေ့ကပြောကြားခဲ့သည်။
မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်များအတွက် Santa Rita မှဆည်းကပ်
Bettina Jamundo ရဲ့အိမ်က Madonna ရဲ့မျက်ရည်တွေ
အီတလီတောင်ပိုင်းရှိ Cinquefrondi တွင်ဖော်ပြထားသောနေရာကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ ဒါဟာတူညီတဲ့ပြည်နယ်ထဲမှာတည်ရှိပါတယ် ...
စိန့်ဂျွန်ဗီယန်နီ၊ သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့၏စိန့်
Paolo Tescione	အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် သြဂုတ်လ 4, 2020 သြဂုတ်လ 5, 2020
(မေလ ၈ ရက်၊ ၁၇၈၆ - သြဂုတ် ၄၊ ၁၈၅၉) စိန့်ဂျွန်ဗီယန်နီ၏ပုံပြင် ...
ဘဝစံနှုန်း ၁။ ဘဝစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလိုအပ်သည်။ အဆိုပါစံအမိန့်ဖြစ်၏ စိန့်သြဂတ်စတင်းကပိုစည်းစနစ်ကျလေလေ၊ အကယ်၍ သင်သံသရာကိုကြည့်မည်ဆိုလျှင်အရာအားလုံးသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေပြီးနေကမ ...
Paolo Tescione	အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် သြဂုတ်လ 3, 2020 သြဂုတ်လ 3, 2020
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်ကမက်ဂျူဂျိုးဂျ်လူငယ်တွေကိုဒီလိုပြောခဲ့တယ် -“ မင်းဟာအပျိုစင်မာရိရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုခံယူပါစေ
Paolo Tescione	အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် သြဂုတ်လ 3, 2020 သြဂုတ်လ 4, 2020
စိန့်ပီတာဂျူလီယန်အိုင်းမတ်၊ သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့၏စိန့်
(ဖေဖော်ဝါရီ ၄၊ ၁၈၁၁ - ၁၈၆၈ သြဂုတ် ၁ ရက်) စိန့်ပီတာဂျူလီယန်၏ပုံပြင် ...
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်သမ္မာကျမ်းစာထက် ပို၍ ရှင်းလင်းစွာပြောရန်အရာများစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေငုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြန်းခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်နိုင်ပြီးဇနီးမှမည်သည့်နေရာမှလာသည်။
တစ်နေ့တာ၏လက်တွေ့ကျကျဆည်းကပ်မြှုပ်နှံခြင်း: နေ့၏ပထမ ဦး ဆုံးနာရီကိုမည်သို့ရှင်သန်ရမည်နည်း
နေ့၏ပထမ ဦး ဆုံးနာရီ ၁။ ဘုရားသခင်ထံသင်၏စိတ်နှလုံးကိုပေးပါ။ ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတွေးတောဆင်ခြင်ပါ။
ချစ်ခင်ရပါသောနိုင်ငံရေးသမားများ၊ မင်းတို့အားလုံးသည်“ ကတိပေးသူများအတွက်” စကားများပြီးထူးခြားသည်။
Paolo Tescione	အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် သြဂုတ်လ 2, 2020 သြဂုတ်လ 2, 2020
ငါပုံပြင်အကြောင်းပြောပြမယ် -“ ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာငါတို့ဟာရှာမတွေ့နိုင်တဲ့လူငယ်အများစု ...
မျက်မြင်သက်သေများကကလေးငယ်ယေရှုကို Padre Pio လက်ထဲတွင်တွေ့ခဲ့သည်
စိန့်ပက်ထရိုပီယိုသည်ခရစ်စမတ်တွင်ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ သူသည်ကလေးဘဝကတည်းကကလေးဘဝကိုအထူးဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ Capuchin ယဇ်ပုရောဟိတ် p အရ။ ဂျိုးဇက်မာရိအကြီးအကဲ၊ “ သူ့အိမ်မှာ Pietrelcina ရှိသူသည်စားခွက်ကိုကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ မကြာခဏ ...
Santa Brigida နှင့်သခင်ယေရှု၏ကြီးမားသောကတိတော်များကိုဆည်းကပ်ဝတ်ပြုခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်က ၁၂ နှစ်တိုင်ရွတ်ဆိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပန်ခြင်း ၁။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပန်ခြင်း ၁။ …
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွင်းရေးမှူးအသစ်ခန့်အပ်လိုက်သည်
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ကဗာတီကန်အတွင်းရေးမှူးရုံးကိုသူ့ရဲ့အတွင်းရေးမှူးအသစ်အဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၂ ရက်မှ Mirjana သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ Lady က Medjugorje တွင်ပြောခဲ့သည်
အဖေကိုဘုရားသခင်အားရိုသေလေးမြတ်ခြင်းရွတ်ဆိုကြမည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖခင်တစ် ဦး စီအတွက်စိတ်ဝိညာဉ်များစွာများစွာ ...
Sant'Eusebio di Vercelli၊ သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့၏စိန့်
(ဂ ၃၀၀ - ၁ သြဂုတ်လ ၃၇၁) Sant'Eusebio di Vercelli တစ်စုံတစ်ယောက်၏ဇာတ်လမ်းကခရစ်တော်၏ဘုရားကိုငြင်းပယ်သောအာရိယန်အယူမှားမရှိလျှင်စောစောသူတော်စင်များစွာ၏ဘဝကိုရေးရန်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ယူစီဘိုသည် ...
မုန့်ငါးလုံးနှင့်ငါးနှစ်ကောင်ကို ယူ၍ ကောင်းကင်သို့ကြည့်မျှော်လျက်၊
သြဂုတ်လ ၂ ရက်၊ Assisi ၏စိန့်ဖရန်စစ်ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်း
Paolo Tescione	အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် သြဂုတ်လ 2, 2020 သြဂုတ်လ 3, 2020
San Francesco ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့လည်ခင်းကနေနောက်နေ့သန်းခေါင်အထိ၊
၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၁ ရက်၊ မက်ဂျူဂိုးရီးယားရှိကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်မှပေးပို့သောသတင်းစကား
Paolo Tescione	အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် သြဂုတ်လ 1, 2020 သြဂုတ်လ 1, 2020
Pontifical Academy သည်ဘုရားသခင်ကိုမဖော်ပြထားသော coronavirus စာရွက်စာတမ်းကိုကာကွယ်သည်
Pontifical for Life for Life သည်ပtheိပက္ခနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးပေါ်မှတ်တမ်းကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့သည်။
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်များကိုဖော်ပြရန်စကားလုံးများကိုရှာဖွေရန်ရုန်းကန်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဆာလံကျမ်းကိုပေးခဲ့သည်။ စိုးလ်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၏ခန္ဓာဗေဒ ၁၆ ရာစုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားဂျွန်ကယ်လ်ဗင်ကဆာလံကျမ်းကို“ အားလုံး၏ခန္ဓာဗေဒ” အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ ဦး ခေါင်းကိုဤလင်ပန်း၌ပေးတော်မူပါဟုတောင်းလျှောက်၏။ မ14ဲ ၁၄း၈ ။
သြဂုတ်လ ၁ ရက်၊ Sant'Alfonso Maria de'Liquori ကိုဆည်းကပ်ကိုးကွယ်သည်
နပိုလီယံ၊ ၁၆၉၆ - Nocera de 'Pagani, Salerno, ၁၇၈၇ သြဂုတ် ၁ ရက်၊
theဂုတ်လကို ရည်စူး၍ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ကိုဆည်းကပ်ဝတ်ပြု
Paolo Tescione	အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် သြဂုတ်လ 1, 2020 သြဂုတ်လ 2, 2020
Paolo Tescione	အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် ဇူလိုင်လ 31, 2020 ဇူလိုင်လ 31, 2020
ဘရာဇီးမှ Cardinal João Braz de de Aviz သည်ဗာတီကန်၏သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သောဘဝကို ဦး ဆောင်သူဖြစ်ပြီးကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်အမျိုးသားများမကြာခဏအမျိုးသမီးများအားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံရသည့်အခြေအနေကိုဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့သည်။
အချက်အလက်အတွက်အီးမေးလ်ပို့ပါ [အီးမေးလျ protected]
site တစ်ခုဖွင့်ပြီး Altervista နှင့်ဝင်ပါ - ခွင - အလွဲသုံးစားမှုကိုသတင်းပို့ပါ - သတိပေးချက်များကို Push - ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ